SOFTWARE MAKA ỊBỊARU NA KỌMPUTA - ỊHỌRỌ USORO IHE OMUME - 2019
Usoro kacha mma maka ịbịaru
Usoro mmemme kọmputa na-eme ka usoro nhazi nke ihe dị mfe dị mfe. Ntinye n'ime ngwa dị otú ahụ dị ngwa karịa akwụkwọ mpempe akwụkwọ n'ezie, ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị mehiere, enwere ike idozi ya n'ụzọ dị mfe na ntinye clicks. Ya mere, ịbịaru ihe omume aghọwo ọkọlọtọ na mpaghara a.
Ma n'etiti ngwọta software na mpaghara ịbịaru na-enwekwa ọdịiche dị n'etiti ngwa dị iche iche. Ụfọdụ n'ime ha nwere ọtụtụ ọrụ dị mma maka ndị ọkachamara. Mmemme ndị ọzọ na-anya isi dị mfe nke zuru oke maka ndị na-amalite ịbịaru.
Isiokwu ahụ na-enye ihe osise kachasị mma dị taa.
KOMPAS-3D bụ otu okwu nke AutoCAD sitere na ndị mmepe Russia. Ngwa a nwere ọtụtụ ngwaọrụ na ọrụ ndị ọzọ na-adabara ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na atụmatụ nke ngwa, ụlọ, wdg. Ndị mmalite ga-esikwa ike ịghọta ọrụ ahụ na KOMPAS-3D.
Ihe omume a bara uru maka ịbịaru sekit eletriki, nakwa maka ịbịaru ụlọ na ihe ndị ọzọ dị mgbagwoju anya. KOMPAS-3D na-akwado ihe ngosi gburugburu gburugburu 3D, dịka a pụrụ ịhụ site na aha usoro ihe omume ahụ. Nke a na-enye gị ohere ịmepụta ọrụ ndị e kere eke na ụdị ngosi.
Site na nkwenye, dị ka ọtụtụ ihe omume ndị ọzọ dị mkpa maka ịbịaru, nwere ike ịkọwa amaokwu ọbụla COMPAS-3D. Mgbe ịmalitere ikpe ikpe ahụ maka ụbọchị 30, mgbe nke a gasịrị, ị ghaghị ịzụta ikike iji rụọ ọrụ na mmemme ahụ.
Download usoro ihe omume KOMPAS-3D
Ihe Ọmụmụ: Bịaruo KOMPAS-3D
AutoCAD bụ usoro kachasị ewu ewu maka ịbịaru eserese, ụlọ ụlọ, wdg. Ọ na-esetịpụ ụkpụrụ na nhazi nke injinia na kọmputa. Ntugharị nke ngwa ngwa a nwere nnukwu ngwá ọrụ na ohere maka ịrụ ọrụ na eserese.
Nlereanya nke ihe oyiyi na-agba ọsọ usoro nke ịkepụta ihe dị mgbagwoju anya ọtụtụ ugboro. Dịka ọmụmaatụ, iji mepụta eriri ma ọ bụ kwekọrọ na ya, ị ga-achọ idenye igbe akara kwekọrọ na parameters nke akara a.
Usoro ihe omume ahụ nwere ike iji arụmọrụ 3D. Tụkwasị na nke ahụ, enwere ohere iji dozie ihe ọkụ na ihe ederede. Nke a na-enye gị ohere ịmepụta ihe ngosi dị mma iji gosipụta ọrụ ahụ.
Ndabere nke usoro ihe omume ahụ bụ enweghị enweghị nnwere onwe. Oge ikpe ahụ bụ ụbọchị 30, dị ka KOMPAS-3D.
NanoCAD bụ usoro mmemme dị mfe. Ọ bụ ihe dị ala karịa ngwọta abụọ gara aga, ma ọ bụ zuru oke maka ịmalite na ịmụta ịbịaru kọmputa.
N'agbanyeghị na ọ dị mfe, ọ ka nwere ike ịme ihe ngosi 3D ma gbanwee ihe site na njedebe. Ihe bara uru gụnyere ngwa ngwa nke ngwa na interface na Russian.
Download usoro NanoCAD
Freekad bụ usoro mmemme n'efu. Enwere ike na nke a bụ ihe kachasị mma karịa software ndị ọzọ. Ihe ndi ozo ndi ozo di ala kariri ngwa ndi yiri ya: ihe di iche iche maka iru, ole na ole oru ndi ozo.
FreeCAD dị mma maka ndị na-amalite na ụmụ akwụkwọ na-aga ịbịaru ihe.
Download FreeCAD software
ABViewer bụ ngwọta ngwanrọ ọzọ maka ịbịaru. Ọ dị mma igosi onwe ya dị ka ihe omume maka ịbịaru ngwá ụlọ na atụmatụ dị iche iche. Na ya, ị nwere ike ịbịaru eserese, tinye callouts na nkọwa.
N'ụzọ dị mwute, a na-akwụ ụgwọ ihe omume ahụ. Ọnọdụ ikpe na-ejedebe na ụbọchị 45.
QCAD bụ usoro mmemme n'efu. Ọ dị ala karịa nkwụghachi ụgwọ dịka AutoCAD, mana ọ ga-agbadata dịka ngbanwe ọzọ. Usoro ihe omume ahụ nwere ike ịgbanwere ịbịaru na PDF ma na-arụ ọrụ na usoro ndị akwadoro ngwa ngwa ndị ọzọ.
N'ikpeazụ, QCAD bụ ezigbo mgbanwo maka mmemme akwụ ụgwọ dị ka AutoCAD, NanoCAD na KOMPAS-3D.
Ọ bụrụ na ị na-amalite ịrụ ọrụ na ịbịaru na kọmputa, mgbe ahụ ṅaa ntị na usoro ihe omume A9CAD. Nke a bụ ihe omume dị mfe na n'efu.
Otu interface dị mfe na-enye gị ohere iji ụzọ dị mfe ịde ma mepụta eserese mbụ gị. Mgbe nke ahụ gasịrị, ị nwere ike ịga na mmemme ndị ka njọ dị ka AutoCAD ma ọ bụ KOMPAS-3D. Ihe - amara nke iji na n'efu. Cons - oke njirimara nke atụmatụ.
Download usoro A9CAD
Ashampoo 3D CAD Architecture - mmemme maka ịbịaru eserese, maka ndị na-emepụta ihe.
Usoro ihe eji akwado kọmputa a nwere ihe niile dị mkpa maka ịmepụta ihe abụọ na akụkụ atọ nke ụlọ na atụmatụ ụlọ. Site na ntanetị nke onye ọrụ ya na ọrụ dị oke mma, ọ ga - abụ nhọrọ magburu onwe ya maka ndị mmadụ na njikọta.
Download Ashampoo 3D CAD Architecture Software
A haziri usoro TurboCAD iji mepụta ihe nke ihe dị iche iche, ma akụkụ abụọ na akụkụ atọ.
Ọrụ ya dị nnọọ ka AutoCAD, ọ bụ ezie na o nwere ikike ngosi nke kachasị mma nke ihe atọ dị iche iche, ọ ga - abụkwa ezigbo nhọrọ maka ọkachamara na nchịkwa nke injinịa.
Download usoro TurboCAD
Ejiri usoro kọmputa kwadoro VariCAD, dịka mmemme ndị ọzọ yiri nke ahụ, iji kee eserese na ụdị atọ.
Ihe omume a, nke na-elekwasị anya na ndị mmadụ na-arụ ọrụ na engine engineering, nwere ụfọdụ njirimara bara uru, dị ka ọmụmaatụ, na-atụle oge ịbanye na ihe a na-ese na ntan.
Download usoro VariCAD
ProfiCAD bụ usoro ihe osise na-emepụta maka ndị ọkachamara nọ n'ọhịa.
Na CAD a nwere nnukwu isi nke ihe ndị a kwadebere nke eletrik eletrik, nke ga-enyere aka n'ịmepụta ihe osise dị otú ahụ. Na ProfiCAD, dị ka VariCAD, ọ ga-ekwe omume ịchekwa esere dị ka ihe oyiyi.
Download usoro ProfiCAD
Ya mere, ị zutere ihe omume mmepụta ihe na kọmputa. Iji ha mee ihe, ị nwere ike ịbịaru ngwa ngwa ịbịaru maka nzube ọ bụla, bụrụ ọrụ ọrụ maka ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ihe omume maka ụlọ maka ụlọ.